Iindaba - Loluphi uhlobo lwendawo ukukhanya kwesityalo se-LED kulungele ukukhula kwezityalo?
Imbuyekezo Archibald Tech Co., Ltd.
Luhlobo olunjani lwendawo ukukhanya kwesityalo se-LED kukulungele kakhulu ukukhula kwezityalo?
Ubungakanani bokukhanya kwesityalo se-LED kulunge kakhulu ekukhuleni kwezityalo, iintyatyambo kunye neziqhamo. Ngokubanzi, izityalo zangaphakathi kunye neentyatyambo ziya kukhula zisiba mandundu ngokuhamba kwexesha. Esona sizathu siphambili kukusilela kwemitha yokukhanya. Ukukhanya kwe-LED okulungeleyo ukubonwa okufunekayo kwezityalo akunakukhuthaza kuphela ukukhula kwazo, kodwa kukwandisa ixesha lokudubula kunye nokuphucula umgangatho weentyatyambo.
Ukusetyenziswa kwale nkqubo yokukhanya kokusebenza okuphezulu kwimveliso yezolimo enje ngezindlu zokugcina izityalo, izindlu zokugcina izityalo kunye nezinye izibonelelo kwelinye icala zinokusombulula ukusilela kokungabikho kwelanga okubangela incasa yeetumato, iikomkomere kunye neminye imifuno yendlu eluhlaza iyancipha, kwaye Kwelinye icala, inokuqhubela phambili imifuno ye-greenhouse solanum. Kuza kudweliswa kufutshane noMnyhadala weNtwasahlobo ukufezekisa injongo yokulima ngaphandle kwexesha lonyaka.
Xa uqhuba ukukhanya kwesityalo se-LED ngokusebenzisa i-buck regulator, i-LED ihlala iqhuba i-AC ripple yangoku kunye ne-DC yangoku ye-inductor ngokungqinelana nolungiselelo olukhethiweyo lokucoca ulwelo. Oku akuyi kukonyusa kuphela ukuphakama kwe-RMS okwangoku kwi-LED, kodwa kunyuse nokusetyenziswa kwayo kwamandla. Oku kungonyusa ubushushu bokudibana kwaye kube nefuthe elibalulekileyo kubomi be-LED.
Xa isezantsi kunombala wokujika kwe-LED (umbane ovulekileyo we-LED emhlophe umalunga ne-3.5V), ukugqitha ngoku nge-LED kuncinci kakhulu. Ngaphezulu kwalo mqobo, ukunyuka kwangoku kukwanda ngokubonakalayo ngohlobo lwamandla ombane. Oku kuvumela i-LED ukuba ibunjwe njengomthombo wevolthi kunye nesixokelelwano sokuchasana, ngenqaku lesilumkiso: le modeli isebenza kuphela phantsi kokusebenza kweDC ngoku. Ukuba iDC yangoku kutshintsho lwe-LED, ke uxhathiso lwemodeli kufuneka luguqulwe kwangoko ukubonisa imeko yangoku yokusebenza. Ngaphantsi kokuya phambili ngoku, ukusasazeka kwamandla kwi-LED kuya kushushubeza isixhobo, esiya kutshintsha ukuhla kwamandla ombane kunye nokuhamba ngamandla Kubaluleke kakhulu ukuba uqwalasele ngokupheleleyo imeko yokusasaza ubushushu xa umisela i-impedance ye-LED.
Ukuqaqamba okulungelelanisiweyo kufuna ukungaguquguquki kwangoku ukuqhuba ukukhanya kwesityalo se-LED, kwaye okwangoku kufuneka kugcinwe kuhlala kungakhathalelwanga ivolthi yokufaka. Oku kunzima ngakumbi kunokuba nje uqhagamshele ibhalbhu ye-incandescent kwibhetri ukuyinika amandla.
Ixesha Post: Jul-29-2020
© Copyright - 2020: Onke amalungelo agciniwe.